I-China i-1325 i-disc isixhobo se-atc cnc router fektri kunye nabavelisi | JCUT
Umzi-mveliso wokhuni: zonke iintlobo zeengcango, iiWindows, iikhabhathi, iingcango zomsebenzi wokhuni, iingcango zepende ezingenasimahla, izikrini, ubuciko bokucofa iiWindows, ukuqhubekeka kwetafile kunye nezinye iifenitshala, ukuqhuba iinkuni. Umzi wentengiso: imiqondiso yentengiso, ukuvelisa imiqondiso, ukusika izinto zentengiso, ukubumba iplastiki, ukuvelisa izibane ze-neon kunye nezinye izinto zokuhombisa.
1. Ukusebenza ngokuphezulu:ii-spindle motors ezininzi zisebenza ngaxeshanye, zinokugqibezela ukuqhubekeka kweemveliso ngobuninzi. Inkqubo yotshintsho lwesixhobo esizenzekelayo, akukho longenelelo ngesandla, inkqubo yenziwe ngokuzenzekelayo. Sebenzisa itafile ye-vacuum ye-adsorption yamazwe aphesheya, ixhotywe ngompu vacuum enomthamo oqinileyo we-adsorption, uyilo olu-zone, ukuqina kwe-adsorption yeendawo ezahlukeneyo zezixhobo, kuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle.
Isantya sokuhambisa ngokukhawuleza: Zombini Shaf ujikelezo lwe-rack, isantya esiphezulu, ukusebenza okuphezulu, isantya esihamba ngeenyawo ukuya kwi-120000MM / MIN.
3. Isantya sokubhula ngokukhawuleza: Ukusetyenziswa kwesantya esiphezulu sokunyathela imoto ngesantya esiphezulu kunye nokuqhuba, i-Y axis isebenzisa i-motor drive ephindwe kabini, umgama ochanekileyo wokuqina we-rack, ngesikrelemnqa esinamandla sokwenza isantya sokubeka ngokukhawuleza.
4. Ukusebenza ngokuthambileyo: Ukungenisa umgca wesikhokelo sikaloliwe, umqolo ophindwe kabini kunye nemigca emine yeebhloko zesilayida sebhola, amandla amakhulu okuhambisa, ukuqhuba kakuhle, ukuchaneka kwexesha elide, ubomi obude, ukuchaneka okuphezulu okungenisiweyo kwebhola, ukusika ngokuchanekileyo.
5. Ulawulo lobuchule: ukwamkelwa kwenkqubo yokulawulwa kwekhompyuter ye-ubukhulu bekhadi le-macro (inkqubo yokulawulwa kwesiphatho se-DSP ngaphandle kukhetho), kunye nemisebenzi yokwahlukana, ukucima umbane, isixhobo sokusika kunye nokubaza, ngozinzo oluphezulu kunye nokusebenza okuphezulu, kwaye kulula ukufunda.
6. Ukuchaneka okuphezulu: I-algorithm yokuxela kwangaphambili yenqanaba ezintathu inokuqinisekisa isantya sokusebenza kwejika, kunye nokuchaneka, kwaye inokubakho ngokuhambisanayo nesoftware yasekhaya neyangaphandle (njenge: MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint) njalo njalo.
7. Yomelele kwaye yomelele: Isakhiwo sentsimbi sisonke senzelwa i-welded, yintsimbi eyomeleleyo, amandla amakhulu, ukujikeleza okuthe tye, ixesha elide ukusebenza okuphezulu ngaphandle kokudidiyelwa, akukho kugungqiswa. Ukunyakaza kokuhamba komzimba, qinisa itafile, kungalungiswa ngokuchaseneyo kwezinto zetafile yomsebenzi, yomelele kwaye iqinile.
Umzi-mveliso wamaplanga: Zonke iintlobo zeengcango, iiWindows, iikhabhathi, iingcango ezenziwe ngomthi, iingcango ezingenazipeyintyi, izikrini, ubuciko bokuzoba Windows, ukuqhuba kwamacwecwe kunye nezinye iifenitshala, ukulungisa iinkuni.
Umzi wentengiso: Iimpawu zentengiso, ukuveliswa kwemiqondiso, ukusikwa kwezinto ezisetyenziswayo, ukubumba iplastiki, ukuvelisa izibane ze-neon kunye nezinye izinto zokuhombisa.
Icandelo lezobugcisa kunye nezobugcisa: Inokuba semthini, ngoqalo, kwimarble yokufakelwa, kwibhodi yemvelo, yibhodi yemibala ephindwe kabini, ikristali kunye nezinye izinto zokwenza iipateni ezintle kunye nokubhalwa kombhalo.
Izixhobo ezifanelekileyo: Izinto ezahlukeneyo zokhuni; IAluminiyam ipleyiti, ipleyiti ye-aluminium, iplasitiki; I-PVC, i-acrylic, iibhodi zemibala ephindwe kabini, ibhodi ye-density board, i-crystal board kunye nezinye izixhobo zentengiso; Kwaye imarble yokuthambisa ethambileyo kunye nezinye izinto ezingesinyithi kunye nesinyithi.
Umatshini wokusika oPhezulu kwi-R7 ATC CNC
Isixhobo seMagazini Isikhundla se-servo sediski yesixhobo sokutshintsha isixhobo somatshini ngesixhobo sesixhobo
Umqhubi I-Japan Yaskawa i-850w umqhubi we-servo
Inkqubo yokulawula Inkqubo yolawulo yeSyntec 6MB
Ukusinda okushiyekile 2700kg
Edlulileyo: Umatshini we-atc funiture
Okulandelayo: Isibini somatshini sokukroba umatshini wokucoca i-cnc router